Samsung Gear S3, notsapainay tao amin'ny IFA any Berlin | Androidsis
Tamin'ny herintaona Samsung gaga ny rehetra nandritra ny famelabelarany tao anatin'ny rafitry ny IFA avy any Berlin rehefa mampiseho ny Samsung Gear S2, ny smartwatch voalohany an'ny orinasa Koreana miaraka amina dial boribory ary niavaka tamin'ny fampiasana Tizen.
Rehefa nanana izahay vintana hanandramana azy mazava be ny fehin-kevitray: io no smartwatch tsara indrindra teny an-tsena. Ary manavao ny ankohonany amin'ny mpikambana vaovao i Samsung ary tsy nisalasala nanantona ny IFA izahay mba hitsapana izaonalizar amin'ny horonantsary Samsung Gear S3, famantaranandro manaraka ny dian'ny teo alohany. Hamerina fahombiazana ve izany?
1 Ny Samsung Gear S3 dia manana vatana vita amin'ny vy manome ny fiambenana fijery tena lafo
2 Toetra teknika Samsung Gear S3
Ny Samsung Gear S3 dia manana vatana vita amin'ny vy manome ny fiambenana fijery tena lafo
Araka ny efa nampoizina, Ny Samsung Gear S3 dia misy vatana vy izayManome endrika tsara tarehy ilay fitaovana. Mahafinaritra tokoa ny mikasika azy ary mahatsapa tena tsara eo am-pelatanana. Raha tsy noho ny safidy hafa dia mety hieritreritra isika fa famantaranandro mahazatra io.
Tiako ny rafitra ampiasainy hametraka anao ny famantaranandro, izay manaraka mora toy ny tamin'ny maodely teo aloha. Maninona no mikorontana amin'ny mekanika sarotra raha toa ka mandeha tsara ny zavatra taloha? Manohitra an'io izahay dia manana io rafitra fehin-kibo manokana io izay manery anao hisafidy ny katalaogin'ny mpanamboatra Koreana satria ny Samsung Gear S3 dia tsy mifanaraka amin'ny tady rehetra eny an-tsena.
Toetra teknika Samsung Gear S3
lafiny X X 49 46 12.9 MG
lanja Gramin'ny 57
Operating System Tizen ho an'ny akanjo azo apetraka 2.3.2
efijery 1.3-inch Super AMOLED amin'ny 360 x 360 teboka ary 278 dpi
processeur Dual-core 1 GHz hafainganana
Tahiry anatiny 4GB
Fitaovana hafa Vatan'ny vy / Fantsom-paritra / mpandahateny
bateria 380 mAh tsy azo esorina
Nail toetra ara-teknika mitovy amin'ny hita teo alohany, mandeha tsara ny Samsung Gear S3. Ny rafi-piasan-dry zareo amiko dia toa voatsara kokoa noho ny Android Wear, na dia eo aza izany, ny tsiro ny loko.
El pulsometra mitohy miasa toy ny hatsarana izy io, mamantatra ny am-polonao ao anatin'ny segondra vitsy ary tena marim-pototra. Antsipirihany iray nampihetsi-po ahy dia ny nanatanterahan'i Samsung mpandahateny tamin'ny famatrehany.
Tsy fantatsika ny vidiny ofisialy, na dia azontsika atao aza ny manantena fa hahatratra ny tsena tsy ho ela amin'ny vidiny eo anelanelany 449 sy 499 euro.
Ary ho anao,Ahoana ny hevitrao momba ny Samsung Gear S3?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Gear S3, fahatsapana voalohany